ပြျောရှငျတဲ့အိမျထောငျရေး ပိုငျဆိုငျထားရတဲ့ မငျးသားကွီး တှနျမျဟနျ့ရဲ့လြှို့ဝှကျခကျြ – Focus Myanmar
၁) အသကျ ၃၀ မတိုငျခငျ အိမျထောငျမပွုနဲ့
တှနျမျနဲ့ရီတာဟာ ၁၉၈၅ ခုနှဈတုနျးက ရိုကျခဲ့တဲ့ Volunteers ဆိုတဲ့ ဇာတျကားမှာ စတှခေဲ့ကွတာပါ။ အဲဒီကားမှာ သူတို့နှဈယောကျက ခဈြသူတှလေို သရုပျဆောငျရတာပေါ့။ သူတို့နှဈယောကျ ဇာတျလမျးဖွဈခငျြပမေယျ့ အဲဒီအခြိနျတုနျးက တှနျမျမှာ အိမျထောငျရှိပါတယျ။ ကလေးလညျး ၂ ယောကျရှိပါတယျ။ ရီတာမှာလညျး လကျထပျမယျ့သူ ရှိပါတယျ။ ဒီလိုပဲ သုံးနှဈလောကျ နှဈယောကျသား ကြိတျပုနျးခုတျနပွေီးနောကျတော့ တှနျမျဟာ ပထမအိမျထောငျနဲ့ကှာရှငျးလိုကျပါတယျ။
ပထမအိမျထောငျကို အလငျြအမွနျဆုံးဖွတျမိခဲ့တယျလို့ တှနျမျက ဆိုပါတယျ။ ငယျရှယျတဲ့အခြိနျ၊ စိတျလိုကျမာနျပါလုပျတတျတဲ့အခြိနျ၊ အလုပျတှမြေားနတေဲ့အခြိနျဖွဈတာကွောငျ့ သခြောမစဉျးစားလိုကျမိဘူးပေါ့။ မှနျကနျတဲ့ လကျထပျခွငျးဖွဈဖို့စိတျလိုကျမာနျပါ မလုပျပဲ သခြောသတိထားပွီး ဆုံးဖွတျဖို့လိုတယျလို့ တှနျမျက ယူဆပါတယျ။ “အသကျ ၃၀ မပွညျ့ခငျ အိမျထောငျမပွုပါနဲ့” လို့တှနျမျက ပွောထားပါသေးတယျ။
နှဈတှကွောရှညျလာပမေယျ့ တှနျမျတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ကူညီပံ့ပိုးပေးနတေုနျးပါပဲ။ ၂၀၁၅ ခုနှဈ၊ ရီတာ ရငျသားကငျဆာဖွဈတုနျးက ရီတာဟာ သူတို့ရဲ့အိမျထောငျရေးကို အရမျးစိတျပူခဲ့ပါတယျ။ တှနျမျ သူမအပျေါပွောငျးလဲသှားမှာကို စိတျပူခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူမ စိတျပူသလိုမဟုတျပဲ တှနျမျက သခြောဂရုစိုကျပေးလို့ သူတို့အိမျထောငျရေးက ပိုလို့တောငျ ခိုငျမွဲလာပါသေးတယျ။ ကံကောငျးစှာနဲ့ပဲ အခြိနျခဏလေးနဲ့သူမရဲ့ရောဂါ ပြောကျကငျးသှားပါတယျ။ ခီမိုတောငျ သှငျးစရာမလိုခဲ့ပါဘူး။
တှနျမျနဲ့ရီတာဟာ ခရီးအလှနျထှကျပါတယျ။ နရောအနှံ့ကိုသူတို့ရောကျဖူးကွပါတယျ။ တှနျမျရိုကျမယျ့ ဇာတျကားထဲက နရောတှကေိုလညျး ရီတာက လိုကျလညျပါတယျ။ ဒီလောကျအကွာကွီး လကျထပျပွီးတာတောငျမှ ခဈြစခငျစတုနျးကလိုပဲ တဈယောကျအပျေါတဈယောကျ ကောငျးတဲ့အရာလေးတှေ ပွုလုပျပေးလရှေိ့ကွပါတယျ။
“မီးဖိုခြောငျ(သို့)ဖုနျးနားလေးမှာ စာရေးပွီး ကြှနျတျောခနျြခဲ့လေ့ ရှိပါတယျ။ သူမအတှကျ ကောငျးသောနလေ့ေးဖွဈပါစေ စသဖွငျ့ ဆုတောငျးလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတော့ရဲ့ တဈနတေ့ာကိုလညျး ဓာတျပုံလေးတှေ ရိုကျပို့ပါတယျ။ သူမ ကြှနျတေျာ့ဘေးမှာ မရှိရငျ ကြှနျတျောရောကျတဲ့နရောက ပုံတှကေို ပို့ပေးပါတယျ။ ကြှနျတျောဘာစားတယျ၊ ဘယျသူနဲ့တှတေ့ယျ၊ ဘာတှေ ရိုကျကူးတယျဆိုတာတှပေေါ့။ သူမကလညျး သဘောကပြါတယျ” လို့တှနျမျက ဝမြှေထားပါတယျ။
တှနျမျနဲ့ရီတာဟာ သူတို့နှဈယောကျအတူ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့အခြိနျမှနျသမြှကို တနျဖိုးထားကွတယျ။ ဒါကပဲ သူတို့ရဲ့အခဈြကို ခိုငျမွဲစခေဲ့တာ။ တှနျမျဟာ သူ့ဇနီးကို ဘယျလောကျတနျဖိုးထားကွောငျး အမွဲတမျး ပွောတတျပါတယျ။ “ဒီအမြိုးသမီးဟာ ကြှနျတျောဝသညျဖွဈစေ၊ ပိနျသညျဖွဈစေ ကြှနျတေျာ့ကို ခဈြပေးတယျ။ ကြှနျတျော ဆံပငျရှိသညျဖွဈစေ၊ ထိပျပွောငျသညျဖွဈစေ ကြှနျတေျာ့ကိုခဈြပေးတယျ။ သူမ ကြှနျတေျာ့ကိုခဈြပေးတာကွောငျ့ ကြှနျတျောဟာ ကံကောငျးတဲ့လူသားတဈယောကျဖွဈနတောပါ” တဲ့။
၅) အရေးကွီးဆုံးအခကျြက မှနျကနျတဲ့သူဖွဈဖို့ပါ
ဂြာနယျလဈတှဟော တှနျမျရဲ့ခိုငျမွဲတဲ့ အိမျထောငျရေးသော့ခကျြကို အမွဲထောကျလှမျးလေ့ ရှိပါတယျ။ တှနျမျကတော့ အသာအယာရယျပွီး အမွဲပွောလရှေိ့တာက “ကြှနျတော့အိမျထောငျရေးရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ မှနျကနျတဲ့အမြိုးသမီးကို ရှေးခယျြခဲ့ခွငျးပဲဗြ။ ရီတာကိုရလို့ ကြှနျတျောကံကောငျးခဲ့တာပါ။ ကြှနျတျောက ကံအကောငျးဆုံးလူသားပဲဗြ” ပါတဲ့။
သငျရော အောငျမွငျတဲ့ အိမျထောငျရေးတဈခုဖွဈဖို့ ဘာတှေ လိုအပျတယျလို့ထငျပါသလဲ? ဘယျအရာက အရေးကွီးဆုံးလဲ? အခဈြလား? ငှကွေေးဥစ်စာလား? ရုပျရညျလား? နားလညျမှုလား? သစ်စာရှိမှုလား? ဒါမှမဟုတျ အကုနျလုံးလား?
ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေး ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ မင်းသားကြီး တွန်မ်ဟန့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်
ဟောလီးဝုဒ်ဆယ်လီတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပြိုကွဲနေတဲ့အချိန် မင်းသားတွန်မ်ဟန့်နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မင်းသမီး ရီတာဝယ်လ်ဆင်ကတော့ အိမ်ထောင်သက် ၃၁ နှစ်တာကို ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အခက်အခဲတွေကို အတူကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ပိုလို့တောင် ခိုင်မြဲလာတဲ့ ဇနီးမောင်နှံပါ။ အင်တာဗျူးတွေမှာ တွန်မ်ဟန့်ဖြေလေ့ရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာများလဲ။
၁) အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် အိမ်ထောင်မပြုနဲ့
တွန်မ်နဲ့ရီတာဟာ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ Volunteers ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ စတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီကားမှာ သူတို့နှစ်ယောက်က ချစ်သူတွေလို သရုပ်ဆောင်ရတာပေါ့။ သူတို့နှစ်ယောက် ဇာတ်လမ်းဖြစ်ချင်ပေမယ့် အဲဒီအချိန်တုန်းက တွန်မ်မှာ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ကလေးလည်း ၂ ယောက်ရှိပါတယ်။ ရီတာမှာလည်း လက်ထပ်မယ့်သူ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ သုံးနှစ်လောက် နှစ်ယောက်သား ကျိတ်ပုန်းခုတ်နေပြီးနောက်တော့ တွန်မ်ဟာ ပထမအိမ်ထောင်နဲ့ကွာရှင်းလိုက်ပါတယ်။
ပထမအိမ်ထောင်ကို အလျင်အမြန်ဆုံးဖြတ်မိခဲ့တယ်လို့ တွန်မ်က ဆိုပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်တတ်တဲ့အချိန်၊ အလုပ်တွေများနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် သေချာမစဉ်းစားလိုက်မိဘူးပေါ့။ မှန်ကန်တဲ့ လက်ထပ်ခြင်းဖြစ်ဖို့စိတ်လိုက်မာန်ပါ မလုပ်ပဲ သေချာသတိထားပြီး ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်လို့ တွန်မ်က ယူဆပါတယ်။ “အသက် ၃၀ မပြည့်ခင် အိမ်ထောင်မပြုပါနဲ့” လို့တွန်မ်က ပြောထားပါသေးတယ်။
နှစ်တွေကြာရှည်လာပေမယ့် တွန်မ်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတုန်းပါပဲ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ရီတာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တုန်းက ရီတာဟာ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို အရမ်းစိတ်ပူခဲ့ပါတယ်။ တွန်မ် သူမအပေါ်ပြောင်းလဲသွားမှာကို စိတ်ပူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမ စိတ်ပူသလိုမဟုတ်ပဲ တွန်မ်က သေချာဂရုစိုက်ပေးလို့ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးက ပိုလို့တောင် ခိုင်မြဲလာပါသေးတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ အချိန်ခဏလေးနဲ့သူမရဲ့ရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားပါတယ်။ ခီမိုတောင် သွင်းစရာမလိုခဲ့ပါဘူး။
တွန်မ်နဲ့ရီတာဟာ ခရီးအလွန်ထွက်ပါတယ်။ နေရာအနှံ့ကိုသူတို့ရောက်ဖူးကြပါတယ်။ တွန်မ်ရိုက်မယ့် ဇာတ်ကားထဲက နေရာတွေကိုလည်း ရီတာက လိုက်လည်ပါတယ်။ ဒီလောက်အကြာကြီး လက်ထပ်ပြီးတာတောင်မှ ချစ်စခင်စတုန်းကလိုပဲ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။
“မီးဖိုချောင်(သို့)ဖုန်းနားလေးမှာ စာရေးပြီး ကျွန်တော်ချန်ခဲ့လေ့ ရှိပါတယ်။ သူမအတွက် ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ စသဖြင့် ဆုတောင်းလေးတွေ ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့ တစ်နေ့တာကိုလည်း ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ပို့ပါတယ်။ သူမ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ မရှိရင် ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာက ပုံတွေကို ပို့ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာစားတယ်၊ ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်၊ ဘာတွေ ရိုက်ကူးတယ်ဆိုတာတွေပေါ့။ သူမကလည်း သဘောကျပါတယ်” လို့တွန်မ်က ဝေမျှထားပါတယ်။
တွန်မ်နဲ့ရီတာဟာ သူတို့နှစ်ယောက်အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှန်သမျှကို တန်ဖိုးထားကြတယ်။ ဒါကပဲ သူတို့ရဲ့အချစ်ကို ခိုင်မြဲစေခဲ့တာ။ တွန်မ်ဟာ သူ့ဇနီးကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားကြောင်း အမြဲတမ်း ပြောတတ်ပါတယ်။ “ဒီအမျိုးသမီးဟာ ကျွန်တော်ဝသည်ဖြစ်စေ၊ ပိန်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော့်ကို ချစ်ပေးတယ်။ ကျွန်တော် ဆံပင်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ထိပ်ပြောင်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော့်ကိုချစ်ပေးတယ်။ သူမ ကျွန်တော့်ကိုချစ်ပေးတာကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ ကံကောင်းတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါ” တဲ့။
၅) အရေးကြီးဆုံးအချက်က မှန်ကန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ပါ
ဂျာနယ်လစ်တွေဟာ တွန်မ်ရဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးသော့ချက်ကို အမြဲထောက်လှမ်းလေ့ ရှိပါတယ်။ တွန်မ်ကတော့ အသာအယာရယ်ပြီး အမြဲပြောလေ့ရှိတာက “ကျွန်တော့အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ မှန်ကန်တဲ့အမျိုးသမီးကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းပဲဗျ။ ရီတာကိုရလို့ ကျွန်တော်ကံကောင်းခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်က ကံအကောင်းဆုံးလူသားပဲဗျ” ပါတဲ့။
သင်ရော အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ? ဘယ်အရာက အရေးကြီးဆုံးလဲ? အချစ်လား? ငွေကြေးဥစ္စာလား? ရုပ်ရည်လား? နားလည်မှုလား? သစ္စာရှိမှုလား? ဒါမှမဟုတ် အကုန်လုံးလား?